तपाईंको घर निर्माणमा केही समस्या छ? जाँचिदिन्छन् 'घरका डाक्टर'ले :: Setopati
सुजन अधिकारी काठमाडौं, मंसिर ११
घर जाँचेको प्रतीकात्मक तस्बिर। तस्बिर सौजन्यः स्किल सेवा
घर! सुन्दै आनन्दानुभूति दिलाउने शब्द। त्यसमा पनि आम नेपालीको जीवनभरको सपना।
सुरक्षासँगै प्रतिष्ठासित पनि गाँसिन्छ घर। तर, त्यही घर निर्माण तथा स्याहार-सम्भारमा ध्यान पुर्‍याउन नसके घर 'खण्डहर' बन्न सक्छ।
'स्किल सेवा' कम्पनीका संस्थापक तथा इञ्जिनियरद्वय रामशरण थापा र रमेश तिमिल्सिना यही समस्या कम गर्न लागि परेका छन्।
संस्थापकद्वय स्किल सेवालाई भवन सुपरीवेक्षक कम्पनी भन्छन्। यसले नयाँ घर बनाउनदेखि बनिसकेका घरका कमीकमजोरी कसरी सुधार्ने भन्नेबारे परामर्श दिन्छ। इञ्जिनियरिङ हिसाबले मर्मतसम्भारको काममा सघाउँछ।
'कुनै घर बनाउनुअगाडि सबै जानकारी दिने सेवा अमेरिकी, युरोपेली देशमा व्यापक छ। तर हामीकहाँ सामान्य संरचना मात्र हेरिन्छ,' कम्पनीका सहसंस्थापक रामशरणले भने, 'अरू स-सानो कुरामा ध्यान नदिँदा पूरै घरमा समस्या आउँछ। हामी यही समस्या समाधानको प्रयास गर्दैछौं।'
उनीहरू आफूलाई 'हाउस इन्सपेक्टर' अर्थात् भवन सुपरीवेक्षक भनेर चिनाउँछन्।
'सुरूमा हाउस इन्सपेक्टरको ठ्याक्कै नेपालीकरण गर्दा मान्छेलाई बुझ्न कठिन हुन्थ्यो। अनि हामी आफूलाई घरको डाक्टर भनेर चिनाउँथ्यौं,' ठट्यौली पारामा रमेशले सुनाए।
कम्पनीमा रामशरणले कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष जिम्मा लिएका छन्। रमेश समस्याको प्रकृति र गरिनुपर्ने समाधान बारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन्छन्। जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँट भएपछि काम सहज हुनेमा दुवै स्पष्ट छन्।
रामशरण थापा र रमेश तिमिल्सिना।
रामशरण र रमेश ख्वपः इञ्जिनियरिङ कलेजमा सँगै पढेका हुन्। दुई वर्षअघि सिभिल इञ्जिनियरिङ सकेपछि उनीहरूले जागिरको साटो आफैं केही गर्ने ठाने। पढाइसँगै व्यावसायिक यात्रा पनि सँगै गर्ने तय भयो।
तर आफूहरूको 'आइडिया' कत्तिको लागू हुन्छ भन्ने निर्क्यौल गर्न चुनौती थियो।
'योजना सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्दै सुरू गरेका थियौं, एक वर्षमै नसोचेको सफलता हात लाग्यो। अहिले सेवाग्राहीको भार धान्नै मुस्किल छ,' रामशरण सुनाउँछन्।
रमेश र रामशरणको कार्यानुभवले भन्छ, घर ठड्याउन जति कठिन छ, हेरविचार उत्तिकै सकस। अझ भवनको लागत खर्च कम गर्न उपेक्षा गरिएका स-साना कुराले समयस्याको पर्खालमा इँटा थपिदिन्छ।
उनीहरूका अनुसार हामीकहाँ बनेका अधिकांश घर समस्यारहित छैनन्। बनाउने बेला प्राविधिक पक्ष ख्याल नराख्नु यसको मुख्य कारण हो। समस्या समयमै पहिचान र समाधान गर्न सके कालान्तरमा देखिने थप झन्झटबाट बच्न सजिलो हुन्छ।
'पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान नभएका अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारको श्रमलागतबाट बनेका घरको प्लास्टर प्राप्रा उप्कने, ढलान भत्किने, पानी छिर्ने समस्याबाट ज्यादा ग्रसित देखिएको छ,' रमेशले भने, 'त्यसैले गुणस्तर प्रत्याभूतिकासाथ सेवा दिन हामीले पहल गरेका हौं।'
उनले थपे, 'पहिल्यै बनिसकेको घरका यस्ता समस्या समाधान गर्ने उपाय निरीक्षण र मर्मत नै हो।'
आफूहरूको काम गर्ने तौरतरिका पनि भरपर्दो र परिपक्व भएको उनीहरूको दाबी छ। घर निरीक्षणअघि सम्झौता गरेर मात्र काम अघि बढाउँछन्। भविष्यमा आइपर्न सक्ने अनावश्यक झमेला र भैपरी समस्या समाधानका लागि सजगता अपनाएको रामशरण बताउँछन्।
स्किल सेवाबाट घर निरीक्षण गराउन 'प्रि-बुकिङ' गर्नुपर्छ। कामको सुरूआती चरणमा निःशुल्क निरीक्षण सेवा दिए पनि हाल तीन हजार रूपैयाँ पर्छ।
'पहिले १०० घरको निःशुल्क निरीक्षण गर्‍यौं, मान्छेले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएनन्,' नेपालमा श्रमको उचित मूल्यांकन नभएको गुनासो छ उनीहरूको।
निरीक्षणपछि आवश्यक सेवा र मर्मतसम्भार खर्चको हिसाब प्रतिवर्गफुटका आधारमा तय हुन्छ।
'समस्या पहिचान भएपछि लाग्ने खर्च र गरिने सुधारबारे लिखित तथा मौखिक जानकारी दिन्छौं। व्यावसायिक रूपमा यसरी घर निरीक्षण गर्ने हामी नेपालकै पहिलो र हालसम्म एक मात्र संस्था हौं,' रमेशले दाबी गरे।
कोरोना र लकडाउन बेला पनि रामशरण र रमेशले काम प्रवर्द्धन र सीप क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा ध्यान दिए। उनीहरूका अनुसार स्किल सेवाले अहिले २५ जनालाई रोजगारी दिएको छ। तै पनि काम भ्याइ-नभ्याइ भएर चाँडो सेवा पुर्‍याउन नसकेको उनीहरू बताउँछन्।
'प्राविधिक कम भएकाले द्रुत सेवा पुर्‍याउन मुश्किल छ। फेरि महामारी र लकडाउनको अनिश्चितताले जनशक्ति बढाएर काम थाल्न गाह्रै छ,' रामशरण भन्छन्, 'ठूलो परिमाणमा स्रोतसाधन नभएर आँट्न सकिरहेका छैनौं।'
रमेश र रामशरणले यो काम दुई-दुई लाख रूपैयाँ लगानीमा सुरू गरेका हुन्। यो चरणसम्म आइपुग्न उनीहरूलाई सकसै नभएको होइन। परिवारलाई मनाउनुदेखि सरसामान जोहोसम्मका कुरा मिलाउनु थियो। नयाँ काम भएकाले आवश्यक सामान सजिलै भेटिएन, औजारहरू भारतबाट आयात गरे।
'जे जसरी भए पनि हामीले काम थालेको पहिलो वर्षमै लगानी उठेर प्रतिफलमा छौं। अहिले परिवार पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ,' रमेश भन्छन्।
घर बनाउँदा या बनिसकेको किन्दा थोरै मात्र विचार पुर्‍याउने हो भने 'घर सपना' साँच्चै साकार हुने उनीहरू बताउँछन्। घर बनाउने भनेको इञ्जिनियरले नक्सा कोर्ने, ठेकेदारले सामग्री जुटाउने र डकर्मीले 'मसला' अनुपात मिलाउने मात्र होइन। टायलदेखि पाइपसम्ममा अलिकति कमजोरी भए ठूलो समस्या आउन सक्छ।
'घर बनाउने बेलै ध्यान पुर्‍याउनु सर्वोत्तम हो। नत्र पसिना काढेर तयार भएको सपना भताभुंग हुन्छ। विगतमा जान-अन्जानमा भएका भूल सुधारको बाटो अब हामी घरका डाक्टरले खोजिदिन्छौं,' एकै स्वरमा भन्छन् उनीहरू।
स्किल सेवासँग ९८२८७२२८९२ मा वा वेबसाइटमार्फत् सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ११, २०७७, ०३:५६:००